Ikhaya STARS E-EUROPE Ama-Kurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Kurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Ikhredithi kuPremiLeLe
I-LB iveza Indaba Egcwele yomdlali webhola ongumqeqeshi waseFrance onesidlaliso “I-LaZoumance". Indaba yethu yeKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane, isizinda somndeni, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso amancane - aziwayo ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamandla akhe, amandla okufunda umdlalo kanye nokuba khona kwendiza. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaKurt Zouma futhi ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokunye, ake siqale.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, Kurt Happy Zouma wazalwa ngosuku lwe-27th luka-Okthoba 1994 eLyon eFrance. Wayengomunye wezingane ze-6 ezalwa ngumama omncane owaziwayo futhi kuyise, uGuy Zouma.
Ubaba kaKurt Zouma - uGuy. Isikweletu Sezithombe: I-5foot5.
Isizwe samaFulentshi sobuzwe obuNsundu esinezimpande zase-Afrika sakhuliswa endaweni yakhe yokuzalwa eLyon, eFrance lapho sakhulela khona kanye nomfowethu osemdala owaziwa njengoLionel no4 ezinye izingane zakubo.
UKurt Zouma wakhulela eLyon eFrance. Ama-Credits Wezithombe: FPCP kanye I-WorldAtlas.
Ukukhula eLyon, uZouma osemusha wayengenasifiso sokudlala ibhola ekuqaleni. Eqinisweni, wayekhetha ukudlala i-basketball. Ngesikhathi uZouma esemdala kwi-9, wazama ukudlala ibhola eVulul-en-Velin lendawo futhi wabona ukuthi wayelisebenzisa kahle.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Kungekudala ngemuva kokuthi uZouma eqale ukudlala iVaulx-en-Velin, wenza isithembiso kubazali bakhe sokuthi uzowenza kulo mdlalo. Ngakho-ke, wasebenza kanzima ukuhambela kahle kwezemidlalo ebheka inhloso ephakeme yokwenza abazali bakhe baziqhenye.
UKurt Zouma - 3rd kusuka kwesobunxele emugqeni we-2nd - eklabhu lezinsizwa iBaulx-en-Velin. Isikweletu Sezithombe: FPCP.
Ngenkathi eVaulx-en-Velin, uZouma wayenemfundo ephakeme futhi eyakha imisebenzi ebholeni eyambona ezama izikhundla eziningi ngaphambi kokuzinza njengomvikeli. Esikhathini esiyisithupha sokuqeqeshwa, uZouma wajoyina i-Academy yaseSaint-Étienne njengomuntu oneminyaka eyi-15 e2009.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Kwakuse-Vaulx-en-Velin lapho uZouma alola amakhono akhe okuzivikela futhi aqopha ukunyuka kwe-meteoric ngohlelo lwentsha. Indlela yakhe ehlukile yokudlala yasheshe yaheha izikhulu zeqembu ezazifuna ukumphakamisa ngaphambi kwesizini ye-2011-12.
UKurt Zouma - 3rd usuka kwesobunxele ume ngezikhundla - ekhuphuka eVaulx-en-Velin. Isikweletu Sezithombe: FPCP.
Ngakho-ke, uZouma wasayina inkontileka yakhe yokuqala yobungcweti noSanta-Étienne ku-2nd ka-Ephreli 2011 futhi wenza umsebenzi wakhe wokuqala weqembu ngesikhathi somdlalo weContee de la Ligue ngokumelene neBordeaux ku-31st Agasti 2011. Uqhubekele phambili nokusiza ukuzuza uSanta-Étienne ukuwina isicoco seComme de la Ligue e2013 futhi wabheka phambili emisebenzini ethembisayo emakilabhini asezindizeni eziphezulu.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
UZouma ufisa ukukhuphuka phezulu ekugcineni waba ngomzimba ku-2014 lapho esayinela iqembu laseNgilandi leCarsea FC kwinkontileka yeminyaka emihlanu nesigamu efinyelela ku- $ 12 million (€ 14.6 million).
Kodwa-ke, ukuhamba komdlali ojabulile kule kilabhu nokufisa ukwenza amatomu akhe okugcwala ibingasheshe njengoba belindele ukuthi i-Chelsea imbolekile ibuyele eSaint-Étienne isizini yonke.
UChelsea ubolekise uKurt Zouma's kuSanta-Étienne ngemuva kokumsayina ku2014. Isikweletu Sezithombe: Ezemidlalo.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Lesi sikhungo ekugcineni sigcine sesenze isizungu esikhulu seChelsea kowobungani besizini edlule bebhekene neWycombe Wandersers. Egqokile nenombolo yeJersey 5, ukhiphe izimpumelelo ezimangazayo emkhankasweni wakhe wokuqala ophelele ngokusiza iChelsea ukunqoba indebe yeLigi kanye ne-Premier League e-2015.
UKurt Zouma uzuze isicoco sePremier League neChelsea kwi2015. Isikweletu Sezithombe: I-TransferMarket.
Masinyane kusenesikhathi, uKurt Zouma uyilungu leqembu lokuqala elehlukile le-Chelsea FC futhi uye wachazwa ngokuthi "ungumvikeli omkhulu" ngejubane lakhe, ukugxuma, ukudlula, ukudubula kanye nekhono lokulwa. Abanye, njengoba besho, umlando.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
UKurt Zouma ushade ngesikhathi sokubhala. Sikulethela amaqiniso ngomlando wakhe wokuthandana nempilo yomshado. Okokuqala, uZouma akaziwa ukuthi wayenayo intombi ngaphambi kokuhlangana nomfazi wakhe uSandra.
Isigamu esingcono yisizwe saseFrance kanye neminyaka emibili mdala kuneZouma. UZouma wayeneminyaka engu-19 lapho eshada naye e-2012. Umshado wabo uyaqina futhi ubusiswe ngezingane ezimbili - indodana nendodakazi - ngesikhathi sokubhala.
UKurt Zouma ononkosikazi nezingane. Isikweletu Sezithombe: I-TheSportReview.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
UKurt Zouma uvela kwimvelaphi yomndeni osezingeni eliphansi. Sikulethela amaqiniso ngokuphila komndeni wakhe.
Mayelana nobaba kaKurt Zouma: Uyise kaZouma ukhonjwa ngegama - uGuy. Ungowesizwe eCentral African Republic othuthele eFrance eyofuna amadlelo aluhlaza iminyaka eminingi ngaphambi kokuzalwa kukaZouma. Ngenkathi eseFrance, uGuy wasebenza kanzima ukondla umndeni wakhe futhi wayevame ukuhambisa uZouma ukuyoziqeqesha. UK Kurt ubonga ubaba osekelayo ngokwazi ukuthi kufanele aqine nini futhi avumelane nezingane zakhe.
Ubaba kaKurt Zouma, uGuy. Isikweletu Sezithombe: 5foot5.
Mayelana nomama kaKurt Zouma: UZouma unomama omncane owaziwayo owayesebenza njengendawo yokuhlanza. Usebenza kakhulu emidlalweni kaZouma futhi ubekhona ngenkathi isikhungo-emuva sisayina inkontileka yaso yokuqala noSp Etienne njengomuntu oneminyaka engu-16. Akumangalisi ukuthi kungani ehluleka ukuzibamba izinyembezi zeJoy lapho kumenyezelwa ukuthi uZouma wayesayine iChelsea kwi-2014. Umama oxhasayo uhlala eluleka uZouma ukuthi agxile emidlalweni yakhe futhi aqhubeke eyisithandwa sakhe esikhulu.
Mayelana nomfo kaKurt Zouma: U-Kurt unezingane zakubo ze-5 ezibandakanya udadewabo okuncane okwaziwayo ngaye. Yize uZouma ehlanganyela nabo ebudlelwaneni obusondelene nabo, usondelene kakhulu nomfowabo omdala uLionel owamgqugquzela ukuthi adlale ibhola. ILionel idlalela iBourg-en-Bresse tiger yesithathu ngesikhathi sokubhala. Ngokwakhe, uZouma usebenza njengethonya elishukumisayo kumfowabo omncane uYoan odlalela iBolton Wanderers.
Kurt Zouma nabafowethu. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Mayelana nezihlobo zikaKurt Zouma: Kude nomndeni wakubo kaZouma, kuncane okwaziwayo mayelana nogogo nomkhulu wakhe kanye nogogo nomkhulu wakhe. Ngokufanayo, akukho okuningi okwaziwayo mayelana nomalume bakaZouma, omalume, abomshana kanye nomshana wakhe ngenkathi umzala wakhe engatholakalanga ezenzakalweni zobudala bakhe esemncane kuze kube manje.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Yini eyenza uKitt Zouma abeke umkhaza? Hlala emuva njengoba sikulethela ukwenziwa kobuntu bakhe ukuze sikusize uthole isithombe esiphelele ngaye. Okokuqala, i-persona kaZouma iyinhlanganisela yezici zobuntu beScorpio zodiac.
Ungumuntu onothando, osebenza kanzima, onengqondo futhi onesizotha wembula amaqiniso aphathelene nempilo yakhe yangasese neyangasese. Unentshisekelo nezindlela zokuzilibazisa ezibandakanya ukudlala imidlalo yevidiyo, ukubuka ama-animes, ukuhambisana nemidlalo ye-basketball, ukuhamba nokuchitha isikhathi esihle nabangane nomndeni.
UKurt Zouma ubuka i-anime njengomsebenzi wesikhathi sokudla. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
UK Kurt Zouma unesilinganiso esilinganiselwe se- $ 5 Million ngaleso sikhathi sokubhala. Imvelaphi yengcebo yakhe ivela emholweni awuthola ezinhlakalweni zakhe zebhola nakwizivumelwano zakhe zokuphelisa.
Ngenxa yalokhu isikhungo emuva sinikezwe ukusebenzisa imali enkulu futhi sinezimpahla ezikhuluma kahle ngale ndlela yokuphila enjengendlu yakhe eLyon eFrance kanye nokuhamba ngezimoto ezihamba kwamanye amazwe ezifaka iPakistan Panamera phakathi kwezinye izimoto.
UKurt Zouma ubonakale komunye wabagibeli bakhe exotic. Isikweletu Sezithombe: I-WTFoot.
Amaqiniso weKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukuhlanganisa indaba yethu yobuntwana kaKurt Zouma kanye ne-biography, nawa amaqiniso angafakiwe kwi-bio yakhe.
UZouma wanikezwa igama lokuqala elithi “Kurt” ngemuva kukaKurt Sloane, umlingiswa kaJean-Claude Van Damme kwifilimu ye-1989 ethi 'Kickboxer', ngenxa yokuthi abazali bakhe bahlabeke umxhwele ngemuva kokubukela lo mlingisi enza kahle emafilimini. Igama lakhe eliphakathi 'Happy' lihambisana nesiko lase-Afrika lokusebenzisa amagama aqondile ngamagama aphakathi.
UKurt Zouma uqanjwe ngoKurt Sloane, umlingiswa kaJean-Claude Van Damme ku-'Kickboxer '(1989) Image Card: Isibuko.
Akanawo ama-tattoo ngaleso sikhathi sokubhala, futhi akakaze abonwe ephuza noma ebhema.
UKurt Zouma akanazimpawu emzimbeni ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Ngokuphathelene nenkolo yakhe, uZouma ungumSulumane futhi ozinikezele ngaleso sikhathi. Okuningi kakhulu, uthandaza amahlandla ayisihlanu ngosuku futhi ubonwe eya ethempelini ngo-Agasti 2018.
Kurt Zouma on uhambo no Paul Pogba nabangane. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Kurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.